Cerebral Palsy Ruzivo
palsy (CP) iboka re mamiriro inokonzerwa nekusagadzikana kwekurapa mukukura kwe "fetus" kana hupenyu hwepakutanga yemwana. Izvi zvinotungamira kukuvara kana kunonoka kukura muuropi. Dambudziko iri rinogara zvachose uye, kunyangwe risinganyanye kukura nezera, iro danho rekushanda kwemunhu ane cerebral palsy rinosiyana zvakanyanya: mune dzimwe nguva, mhedzisiro inogona kunge iri diki kwazvo, nepo kune vamwe, kufamba kwakakanganisika kusvika padanho rekuti wiricheya is kunodiwa. Zvinetso zvakajairika zvine hukama neCP zvinosiyana ne mhando yeCP kusagadzikana. Zvinogona kusanganisira matambudziko ekuona, kubatwa, kuremara pakudzidza, uye nyaya kutaura, kunyora, uye kuita mamwe mabasa ane chekuita nekudzora mota.
Zvinokonzera Cerebral Palsy (PC)
Cerebral palsy inowanzo kukonzerwa nenyaya dzekuvandudza panguva yekuzvitakura inotungamira ku mamiriro asina kujairika muuropi. Munguva yekuzvarwa, kushomeka kweoxygen kunokonzerwa nekukurumidza kuuya kana kutakura-kamuri zvikanganiso kunogona kukonzera kukuvara kwehuropi kunobatsira hutachiona hwehutachiona. CP inogona kukonzerwa nekukuvara kwehuropi kunoonekwa kunoitwa nemwana ari kukura kusvika pazera rekutanga mushure mekuzvarwa. Kutsvagisa kwekurapa kunoenderera mberi kuburitsa pachena zvinhu zvakawanda zvine njodzi zvinogona kuve zvine chekuita neCP kesi. Kuchengetedza kwakanaka kwevabereki, kuve nechokwadi chekudya kwakanaka uye nharaunda kuna amai, kwakakosha pakuona izvozvo zviitiko zvinodzivirirwa yeCP hazviitike.
Cerebral Palsy paMedline Plus: Ruzivo kubva kuInternet yekurapa encyclopedia yeNational Institutes of Health.
Ndezvipi Zvikonzero zveCerebral Palsy?: Ruzivo pane hombe nhamba yemisoro ine chekuita neCP. Inotarisa pane hutano uye ramangwana revana vane chirwere, kubva kuNPO 4MyChild.
Mhando dzeCP Yakabatana neMhasuru Tone
Cerebral palsy inouya yakati wandei mhando, iyo inogona kuve yakabatana ne tsandanyama inzwi kana chaicho nhengo dzemuviri. Izvo zvinosangana nemhasuru toni zvinosanganisira: spastic CP, uko zvisina kujairika musuru toni inokonzeresa matambudziko nekufamba, kazhinji mumakumbo nemuchiuno; ataxia, iyo inoratidzirwa nekusazvibata kwemhasuru kufamba; athetoid, izvo inodzivirira vanotambura kubva pakuchengeta yakagadzika tsandanyama nzvimbo (semuenzaniso, kubata uye kubata); uye yakasanganiswa, uko zviratidzo zveese spastic uye athetoid CP zvinoitika.
Cerebral Palsy: Tariro Kuburikidza nekutsvaga: Ruzivo kubva kuNINDS, sechokwadi pane izvo zvinokonzera, njodzi zviitiko, zviratidzo zvekuyambira, uye mhando dzeCP.
Tsanangudzo uye pekugara kuCerebral Palsy: Mhando dzePC uye nzira yekugara nekudyidzana nevanorwara zvakanyanya. Kubva kuKentucky Hofisi yevaAmerican Vane Urema Mutemo.
United Cerebral Palsy Sangano: Inopa network yakanangana nekukudza kodzero, rusununguko, nemikana yeavo vane CP.
Mutengo weCerebral Palsy: Ruzivo nezve hunhu hwevanhu uye hupfumi hwehuropi hwerima. Izvi zvinoratidzwa nenzira yechinyorwa chedzidzo chakanyorwa neEnvironmental Protection Agency.
Mhando dzePC dzakabatana nezvikamu zvemuviri
Dzimwe mhando yeCP inosanganisirwa nenhengo dzemuviri dzakananga kwete neyakajairika ezvinhu yeiyo tsandanyama system. Mhando idzi dzinosanganisira: quadriplegia, umo makumbo ese mana anotambura zvakanyanya mota kusagadzikana uye neyakajairika kusakwanisa kushanda pamwechete; hemiplegia, mune iyo mitezo kune rumwe rutivi rwemuviri inokanganiswa zvakanyanya, iine kukanganisa kwakanyanya kududzirwa mumadhijiti; uye diplegia, iyo inokonzeresa matambudziko nekukura kwemhasuru, kuenzanisa, nekubatana mumakumbo ese ari maviri.
National Sangano reRare Dambudziko: Ruzivo rwevanorwara necerebral palsy uye kumwe kusagadzikana kwekufamba.
PubMed Yakaverengerwa Zvinongedzo: Veruzhinji-kufambidzana dhatabhesi rekutsvagiswa kwedzidzo nezve cerebral palsy, kubva kudhatabhesi reUS National Library yeMishonga.
Hemi-Vana: Boka rekutsigira revabereki vane vana vane hemiplegia uye hemiplegic cerebral palsy.
Yevana Hemiplegia uye Stroke Association: Rimwe sangano rakafanana risingabatsiri rinotarisa kutsigirwa kwevechidiki hemiplegia.
Kugara neCerebral Palsy
CP inogona kuumba matambudziko akakomba anoramba aripo mukati mezuva nezuva remurwere upenyu. Zviitiko zvakawanda zveCP zvinosanganisira imwe yekuita isingabvumirwe iyo inogona kukanganisa zviito zvakajairika. Zvimwe zvinosanganisira kushomeka kunoramba kuripo kwekudzora tsandanyama kunoita kuti kufamba, kumira, kana kubata zvinhu zviome kana hazviiti. Avo vane CP vanogona kunge vaine matambudziko ekutaura, kudya, kana kufema. Vanogona zvakare kuve nehurema hwekudzidza, kufenda, kana mamwe matambudziko makuru emitsipa. Avo vane nyaya dzakakomba kwazvo dze CP inoda yakasimba, kurapwa kweupenyu hwese. Ivo havagone kuzvinyatso kuzvitarisira vakazvimiririra nekuda kwekukanganisa kwekuziva kana kuvimba nemidziyo yekurapa.
VanaHutano: Cerebral Palsy: Ruzivo rwekutarisana neCP yakanangana nevana.
Cerebral Palsy Mhuri Network: Ruzivo rwekugara neCP uye kushamwaridzana nevamwe vanorwara nemhuri dzavo. Inotarisirwa kuvabereki uye kuronga kwenguva refu kuchengetedza vana vane yakaoma CP.
Laurent Clerc National Matsi Yekudzidzisa Center: CP: Inotarisa pekugara pekugona kwenzvimbo dzakasiyana siyana dzePC munzvimbo yekirasi.
Iko kune yakakura uye iri kukura muviri yezvigadzirwa iri kutsvaga kudzorera kuzvimiririra uye kuzara kwe upenyu kune vanotambura neCP. Mawiricheya zviripo zvinogona kutakura zvinodikanwa zvevazhinji dzakasiyana vevarwere veCC; vanofamba, tsvimbo, uye zvimwe zvigadzirwa zvinobatsira zviripo. Kune avo vane kukanganisika kwakanaka kwekudzora mota, zvinhu zvidiki zvakaita sepenzura uye sirivheri zvakagadzirwa mukati kufambidzana mafomu. Varwere vasingakwanise kutaura vanogona kushandisa zvishandiso zvekutaurirana zvinodudzira mafambiro ehuro. Ivo vanokwanisa zvakare kuisa diki keyboard kuti vagadzire anozivikanwa mazwi - zvakanyanya saanozivikanwa mufizikisi Stephen Hawking.
Nyowani Horizons Un-Yakatemerwa: Reji peji rinotarisa zvakazara pamidziyo inogadziriswa yezvinhu zvakasiyana zvinowanzo kuve neCP.
Cerebral Palsy Accessories uye Zvishandiso: Kusasarura, isingabatsiri webhusaiti webhusaiti yezvikamu zvese zvekubatsira midziyo zvine hukama nehupenyu hwevanorwara neCP.
Avo vane cerebral palsy vanogona kubatsirwa nemhando dzinoverengeka dzerapi. chisimba kurapa kunotarisa pakubatsira varwere kuwana hukuru hwekudzora mhasuru, kubatana, uye kuenzanisa kuburikidza nemabasa epanyama epanyama. kushandisa kurapwa kwepanyama, zvinogona kudaro zvinogoneka kusimudzira CP murwere 'kugona kufamba kana kuenzanisa. Kutaura kwekutaura inobatsira nezvinetso nekutaura, kusanganisira zvechipiri nyaya dzakadai sekucheka. Occupational kurapa kunotarisa ku kupuruvha yekuziva mashandiro kuburikidza nemabasa akasiyana siyana, uye kurapa kurapa inobatsira mukusimudzira kwehukama nehunyanzvi hwekuzvimirira hwekugara munzvimbo dzekutandara.
Nzvimbo yeCerebral Palsy Spasticity: Ruzivo nezvekurapa uye ongororo yazvino kubva kunzvimbo yepamusoro yezvokurapa paChipatara chevana cheSt.
Cerebral Palsy Nhungamiro yeKutarisira: Kubva pane ongororo yezvekurapa (yakawanda yacho inowanikwa panzvimbo imwechete) inotarisa pakuongorora nekutarisira avo vane CP. Zvimwe zvine hunyanzvi asi zvakanyanyisa.
American Academy yeCerebral Palsy uye Yekuvandudza Mushonga: Huru huwandu hweruzivo kubva kumiganhu yeazvino CP research.
Bobath Center Cerebral Palsy Kurapa: Charity muUnited Kingdom inopa zviwanikwa zvine chekuita nekurapwa kwepabasa, kunyanya chirwere checerebral palsy.
Tsvagiridzo Zviwanikwa: Kuunganidzwa kwezviwanikwa pakushandiswa kwemimhanzi kurapwa pakurapa matambudziko ane hukama neCP.
Cerebral palsy ndiyo inotarisisa huwandu hwakawanda hwekutsvaga kwekurapa gore rega. Kunyangwe zvizhinji zvekutsvagisa izvi zvichishanda nevarwere vadiki, kuwanda uye kutarisisa kunoenda kune vanorwara neCP sezvavanokwegura uye vachitsvaga mikana izere nekubatana pamwe nevamwe vanhu vese. Kugara neCP idambudziko rezuva nezuva, asi kune nzira dzekupfuma uye kugutsa upenyu. Iko hakuna, uye kunogona kusambove "kurapa" kweCP, asi kunzwisiswa kukuru nemakiriniki uye zvezuva nezuva nyaya dzekubudirira yeavo vanokunda zvavasingakwanise.
Kana iwe ukaona ichi chinyorwa chichibatsira, ndapota sununguka unzwe kuti ubatanidze kana kuishandisa zvakare. Zvese zvatinokumbira ndeyekuti chikwereti chidzokere kune yedu saiti. Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri na 1800wiricheya; tinopa kuchengetedzwa kwevana kushamba, vanofamba vanofamba-famba, & chevana mawiricheya.
Nongedzo kuKoreji yeVadzidzi Vakaremara